Video:-Daawo Madaxweyne Gaas oo si baarqabnimo leh usoo bandhigay waxqabadka xukuumadiisa – Idil News
Video:-Daawo Madaxweyne Gaas oo si baarqabnimo leh usoo bandhigay waxqabadka xukuumadiisa
Posted By: Jibril Qoobey June 15, 2017
Mdaxweynaha Dawladda Puntland oo ku dheeraaday xaalada nabadgelyada dalka ayaa sheegay in dawladda Puntland markasta ku heelantahay ilaalinta nabadgelyada, sharafta, cisiga, karaamada shacabka Puntland iyo sidii shacabkeedu nabadgelyo iyo xasilooni ugu warilahaa, waxaana uu ugu horayn ka hadlay wax qabka xukuumadu ka samaysay arrimaha amaanka.
” Mudane Gudoomiye, Mudanayaal sida aan wada ogsoonahay Puntland waxaa lagu soo qaaday duulaan wajiyo badan leh, oo uu ugu danbeeyay, duulaankii saldhiga ciidanka Daraawiishta ee Af-Urur si loogu waxyeeleeyo nabad galyadeena iyo jiritaankeena.
Mudanayaal, sida aad la socotaan waxay Dowladdu ku dhawaaqday 9kii June 2017 dagaal balaaran oo looga sifeynayo Puntland Burcad-Diimeedka Al-shabaab, waxayna ciidamadeenu u diyaarsan yihiin inay u dhaqaaqaan goob-kasta oo ay ku dhuumaalaysanayaan Al-shabaab, waxaana hubaal ah inay ka qoomameyn-doonaan shacabkii iyo Askarteenii ay waxyeelada u geysteen iyagoo Illaahay hortii u soomanaa. Sidoo kale Mudanayaal, waxaa lagu qabtay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso qaraxyo waaweyn oo lagu dhibaateyn lahaa shacabka Puntland ee qaaliga ah, waxayna Dawladdu abaal-marin iyo dalacsiin u diyaarisay ciidamadii qabtay qaraxyadii Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo mujaahidkii ku dhintay qaraxii Boosaaso oo Dawladdu qoyskiisii u diyaarisay damaanad qaad nololeed.
Sidoo kale Dawladdu waxay hirgelisay
Unugta Gorfaynta Amniga
Barnaamijka Sharciga iyo kala-danbeynta laamaha Booliska,
Dhismaha & furitaanka xafiiska Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadda.
Mudanayaal iyo Marwooyin, waxaa hadda ka socda guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland hawl-galo lagu sugayo nabad-galyadeena iyo xasiloonideena, anagoo adeegsaneyna awoodeena ciidan, isla markaasna kaashaneyna shacabkeena waxaana naga go’an in aysan argagixisadu magaalooyinkeena ku yeelan xarumo ay ku cabsi geliyaan shacabka.
Mudanayaal, mudaddii u dhaxeysay labada kal fadhi ee Baarlamaanka waxaa socday hannaanka isku dhafka ciidamada Federaalka Soomaaliya oo aan dhawaan doonayno in la howl-geliyo ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo looga gudbo ciidan beeleed-yadii watay magaca ciidan qaran” ayuu yiri Madaxweynuhu.
sidoo kale Madaxweynaha oo ka hadlaya arrimo la xidhiidha Fadaraalka ayaa sheegay in Dawladda si dhaw ula shaqayn doonto dawladda cusub ee ee Soomaaliya.
”Mudanyaal, sida aan la socono dalku hadda wuxuu u jahaystay hirgelinta hannaanka Federaalka, sidaa owgeed Dawladda Puntland waxay ka rajeynaysaa Madaxda cusub ee hadda hogaanka haya oo ay Puntland kusoo dhaweysay niyad-sami balaaran inay taabo-geliyaan hannaan Federaal oo dhab ah, lagana fogaado caqliyadii Dawlad dhexe oo xoog badan oo ah tii Soomaaliya ku bur-burtay” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Gudoomiayaha Baarlamaanka Puntland Mudane Ahmed Cali Xaashi ayaa isna dhankiisa ku dheeraaday wax qabadka golaha Wakiilada Dawladda Puntland mudadii u dhexeysey labada kal-fadhi, sidoo kale waxaa uu talobixin iyo baaq usoo jeediyey dawladda Fadaraalka Soomaliya kaasi oo ku saabsan arrimaha dib u habaynta Dastuurka Soomaaliya.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa cadeeyey in dawladdu wakhti xaadirkan ku hawlan tahay qodida ceel biyoodyo horleh taasi oo laga hirgelin doono Puntland, madaama nolosha bini aadanku ku xidhantahay Biyaha.
”Waxaan hadda ka socda oo dhawaan shaqo-gelaya Ceelal gaaraya 8 oo laga qodayo deegaamada kala ah Xiriiro, Xabaal-Reer, Bali-dhidin, Kala-dhacda, Karin-dabel-weyn, Garoowe iyo mid kale oo laga qodayo Xaar-xaarka” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale Kahadlay wax qabadka Dawladda ee la xidhiidh arrimaha kala ah, Arrimaha Maaliyadda, Ilaalinta Hantida Dawladda. Arrimaha Guddaha, Gurmadkii Abaaraha, Arrimaha Caafimaadka, Beeraha iyo Waraabka, Arrimaha Deegaanka, Arrimaha Cadaaladda, Dekadaha, Garoomada Puntland, Arrimaha Ganacsiga, Arrimaha Qorsheyta iyo Xiriirka Caalamiga, Arrimaha Haweenka, Arrimaha Waxbarashada, Howlaha Guud iyo Gaadiidka, Dhismaha wadada Garoowe – Gaalkacyo, Xanaanada Xoolaha, Kaluumeysiga Puntland, Arrimaha Xisbiyada badan ee Puntland, Biyo dhaan Abaaraha Puntland, Heshiiyada Caalamiga ah.